वायु प्रदुषण, मौसम परिवर्तन लगायतका बाह्य कारणले लाग्ने दम राेग, यसका लक्षण र उपचार विधि - ज्ञानविज्ञान
आज विश्व आस्थमा दिवस,‘स्वच्छ वायु, राम्रो सास’भन्ने नाराका साथ नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । आस्थमालाई चलनचल्तीको भाषामा ‘दम’रोग भनेर चिनिन्छ ।
विश्व आस्थमा दिवस २०१७ कै अवसरमा अनलाइनखबरले त्रि.वि. शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जका प्राध्यापक एवं वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ डा. करबीरनाथ योगीसितको कुराकानीमा आधारित छोटो जानकारी तयार पारेको छ ।
आस्थमा भनेको श्वास प्रश्वाससित सम्बन्धित एउटा रोग हो । वातावरणीय प्रदुषण, धुवाँ धुलो, चिसो तथा फूल फूल्ने मौसममा फूलको परागको कणबाट हुने विभिन्न एलर्जीका कारण जुनसुकै उमेर समूहका मानिसलाई आस्थमा हुन सक्दछ ।
यदि कसैलाई एलर्जी छ र त्यो लामो समयसम्म रहृयो भने मानिसलाई आस्थमा हुने गर्दछ ।
आस्थमामा श्वास प्रश्वासका कोषिकाहरुले एक प्रकारको इन्जाइम उत्पादन गर्दछन्, जसले फोक्सोको मांसपेशीहरुलाई खुम्च्याई श्वास प्रश्वास नलीमा व्यवधान उत्पन्न गराउँछ र मानिसलाई श्वास फेर्नमा अप्ठेरो महसुस भई खोकी लाग्ने, स्वाँ-स्वाँ हुने, छाती कस्सिने लगायतका लक्षण हुने गर्दछन् । चुरोट खाने र धुवाँमा बस्ने कारणले हुने दमखोकीलाई सी.ओ.पी.डी.भनिन्छ ।
मिल, मैदा उद्योग, कपडा उद्योग, सिमेन्ट उद्योग, बाटोघाटोमा काम गर्ने व्यक्तिहरुमा पनि आस्थमाको जस्तै समस्या देखिने गर्दछ । जसलाई चिकित्सकिय भाषामा ‘पेशागत दम खोकी’भन्ने गरिन्छ । काम गर्ने क्रममा धुलो धुँवा उड्ने र श्वास फेर्नेबेला नाक मुखबाट फोक्सोसम्म धुलो गएर दम हुन्छ ।
५. मुटु रोगले हुने आस्थमा
मुटु रोगीलाई सोही कारणले दम खोकी भएमा पनि आस्थमाका जस्तै लक्षण हुने गर्दछ ।
यस अर्थमा सबै दम खोकी आस्थमा नहुन पनि सक्दछन् । चुरोट खानेलाई पनि दम, खोकी हुन्छ । आई.एल.डी.मा पनि दम खोकी हुन्छ । त्यस्तै, क्रोनिक अब्सट्रक्टिभ पल्मोनरी डिजिज -सी.ओ.पी.डी.), टि.बी. अर्थात क्षयरोग, निमोनिया भएका विरामीहरुमा पनि दम तथा खोकीको समस्या देखा पर्ने गर्छ । तर ती आस्थमा होइनन् ।
त्यसैले, आस्थमा हुन कि त पुस्तैनी वा वंशाणुगत समस्या वा परिवारका कुनै व्यक्तिलाूई त्यो समस्या भएकै हुनुपर्छ । त्यस्तै, मौसमी एलर्जी वा लामो समयसम्म कुनै प्रकारको एलर्जी भएर त्यसले गर्दा खोकी लागेको वा स्वाँ- स्वाँ भएको हुनैपर्छ ।
दम लागेको कसरी थाहा पाउने ?
सामान्यतया, वायु प्रदुषण तथा एलर्जीका कारण हुने आस्थमा उपचारबाट निको पार्न सकिन्छ । तर खोकी लाग्दालाग्दै पनि त्यसको उपचारै नगरी, स्वाँ-स्वाँ हुने, छाती कराउने अवस्थाको सिर्जना भएमा क्रोनिक आस्थमा हुने गर्दछ । बच्चाहरुमा भाइरल संक्रमणका कारण ब्रोनकाइटिस भएमा पनि आस्थमा जस्तै लक्षण हुने गर्दछन् ।
हाछ्यूँ आउने, घाँटी खसखसाउने, नाक, कान, घाँटी चिलाउने, नाक बन्द हुने, पानी जस्तो पातलो सिगान बग्ने, खोकी लाग्ने, स्वाँ-स्वाँ हुने, सास फेर्न कठिनाई हुने, छाती कसिने यसका प्रमुख लक्षण हुन् ।
दम रोगको घरेलु रोकथामका उपाय
अदुवा दमजस्ता खतरनाक रोगहरूलाई उपचार गराउने प्राकृतिक जडिबुटी हो। विशेषज्ञहरूका अनुसार यसले सुन्निएको स्वासनलीलाई राहत दिन्छ र हावालाई आवतजावत गर्न मद्दत पुर्याउँदछ।Ginger For Asthma
अदुवाको जुस, अनारको जुस र महलाई बराबर मात्रामा मिसाउनुहोस्। यो मिश्रणलाई दिनमा ३ चोटी १-१ चम्चा खाएमा दमबाट राहत पाउन सकिन्छ।
सुकेको अदुवालाई मसिनो गरि पिनेर हरेक दिन १ चम्चा अदुवाको धुलोलाई १ गिलास मनतातो पानीमा मिसाएर पिउनाले पनि दमबाट छुट्कारा पाउन सकिन्छ।
१ इन्च अदुवालाई पानीमा राखेर १० मिनेटसम्म उमालेर उक्त पानी पिउनाले पनि दमबाट तुरुन्तै राहत पाउन सकिन्छ। (अदुवा राखेको चिया पिउँदा के-कस्ता फाइदा हुन्छ, पढ्नको लागि यहाँ क्लीक गर्नुहोस्)
तपाईँले काँचो अदुवालाई नुनसँग मिसाएर पनि खान सक्नुहुन्छ।
२. तोरीको तेल
दमघात भएको बेलामा, तोरीको तेलले हलुका मसाज गर्दा स्वासनलीलाई खुलाउँदछ र स्वास फेर्नमा कुनै बाधा पुर्याउँदैन।Mustard Oil for Asthma
थोरै तोरीको तेललाई कपूरको धुलोसँग तताउनुहोस्।
त्यसलाई एकछिनसम्म चिसो बनाउनुहोस् र मनतातो भएपछि बिरामीको छाती र ढाडमा हलुका मसाज गरिदिनुहोस्।
दमको प्रारम्भिक चरणको बेला लसुनको प्रयोगले फोक्सोमा परेको दवावलाई कम गराउँदछ।Garlic For Asthma
१ कप दूधमा २/३ कोसा लसुन राख्नुहोस् र उमाल्नुहोस्।
कोठाको तापक्रममा त्यसलाई चिसो बनाउनुहोस् र पिउनुहोस्।
तर, तपाईँ यी ५ प्रकारका व्यक्तिहरूमध्येमा पर्नुहुन्छ भने लसुनको प्रयोग नगर्नुहोस्।
कफी सेवन गर्नुको धेरै फाइदाहरू छन्। कफीमा पाइने ‘क्याफिन’ले स्वासनलीलाई आराम प्रदान गर्दछ र तपाईँलाई स्वास फेर्न सहज गराउँदछ। कफी जति कडा भयो, त्यति नै राम्रो! तर दिनमा ३ कपभन्दा बढी कफी नपिउनुहोस्। यदि तपाईँलाई कफी मन पर्दैन भने, कालो चिया पनि पिउन सक्नुहुन्छ। तर हरेक चोटी दमले आक्रमण गरेको बेला कफीको सहायता नलिनुहोला।
प्याँजमा जलनलाई प्रतिरोध गर्न सक्ने विशेषता हुन्छ जसले स्वासनलीमा भएको बाधालाई कम गराउँदछ। साथै, प्याँजमा पाइने सल्फरले पनि सुन्निएको स्वासनलीलाई राहत प्रदान गर्दछ। (प्याँज काट्दा किन आँशु आउँछ? पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)Onion For Asthma
दमले आक्रमण गरेको बेला काँचो प्याँज चपाउनुहोस्। यदि काँचो प्याँजको स्वाद मन पर्दैन भने बफाएको प्याँज पनि खान सक्नुहुन्छ।
दमबाट ग्रसित अधिकांश व्यक्तिहरूमा ‘भिटामिन सी’को कमी भएको हुन्छ। कागतीमा प्रशस्तै भिटामिन सी र एण्टिअक्सिडेन्टहरू पाइन्छन् जसले दमको लक्षणलाई केहि क्षणमै कम गराउँदछ।Lemon For Asthma
बिहानै, १ गिलास मनतातो पानीमा एउटा कागतीको रस मिसाउनुहोस् र आफ्नो स्वाद अनुसार चिनी मिसाएर पिउनुहोस्।
यसो गर्नाले दिनभरी दमले आक्रमण गर्न सक्ने सम्भावना कम हुन्छ ।
यदि कसैलाई वायु प्रदुषण, मौसमी परिवर्तन लगायतका बाह्य कारणले आस्थमा भएको देखिएमा सो मौसममा नियमित औषधि सेवन तथा निरन्तरको उपचारबाट यो रोग पूर्णरुपमा निको पार्न सकिन्छ । तर यदि उक्त व्यक्तिलाई वशांणुगत कारणले आस्थमा भएको छ भने चाहिँ त्यो पूर्णरुपमा निको नहुन पनि सक्दछ ।
दम रोग श्वासप्रस्वाससँग सम्बन्धित भएकाले सावधानीका उपाय पनि यसैसँग सम्बन्धित छन् ।
धुवाँ, धुलोलगायतका वातावरणीय प्रदुषणबाट जोगिनु पर्दछ । त्यसका लागि गुणस्तरीय मास्कको प्रयोग गर्नुपर्दछ । भुत्ला वा रौं भएका पशुपंक्षीबाट टाढै बस्नुपर्दछ ।
यसका साथै चिसोबाट जोगिनुपर्दछ । जाडो समयमा दम रोगले झन् च्याप्छ । त्यसैले घर वा कोठालाई न्यानो पार्ने, न्यानो लुगा लगाउने गर्नुपर्दछ । सकेसम्म चिसोबाट बच्नुपर्दछ । फि्रजमा राखिएका चिसो खानेकुरा पनि खानु हुँदैन । हाछ्युँ आउने, नाक, घाँटी खसखसाउने समस्या छ भने तपाईंलाई एलर्जी हुनसक्छ । त्यसैले एलर्जी हुने काम वा चिजबाट टाढै रहनु बेश हुन्छ । यस्ता एलर्जी भइहाल्यो भने तुरुन्त उपचार गर्नुपर्छ ।
Topics #के हो दम #दम किन हुन्छ #दम राेग #दम राेगकाे लक्षण
Don't Miss it अब सुख्खा मौसममा हुने सुख्खा हावाका कारणले लाग्ने पिनास बाट कसरी बच्ने ?